TOERANA tsara indrindra hipetrahana
Ahoana no hamaritana ny toerana honenana tsara indrindra eto an-tany? - avy amin'ny zavatra niainako manokana, miaraka amin'ny fanampian'ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo cosmopolitans hafa sy fikambanana manam-pahaizana manokana.
Isan-taona dia olona an'arivony maro no mirohotra mankany amin'ny firenena hafa mitady fiainana tsara kokoa. Izany dia vokatry ny faniriana hampitombo ny fahasambaran'izy ireo ary hanome ny ankizy ho avy mendri-kaja. Indraindray ny antony dia mitoetra ao amin'ny faniriana cosmopolitan'ny mpifindra monina izay misafidy firenena iray manokana mifototra amin'ny tiany manokana. Ary, mazava ho azy, ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra dia ny fanambadiana ofisialy, ny fianarana ary ny asa. Ahoana no hamaritana toerana honenana tsara indrindra Ety an-tany? - avy amin'ny zavatra niainako manokana, miaraka amin'ny fanampian'ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo cosmopolitans hafa sy fikambanana manam-pahaizana manokana.
Ny orinasan-kevitra consultant Resonanse Consultancy dia nanolotra fikarohana sy fanombanana fanadihadiana ho an'ny besinimaro tanàna tsara indrindra honenana tamin'ny 2021. Ny lisitra dia ahitana ireo voatendry manana fiainana sy fiainana miasa.
Ny mason-tsivana fisafidianana ireo megacities manintona indrindra amin'ny fiainana dia nahitana ireto manaraka ireto:
Toerana jeografia sy toe-javatra epidemiolojika (toetr'andro, fiarovana, isan'ny olona voan'ny virus coronavirus).
Ny toe-tsain'ny mponina eo an-toerana: fomba amam-panao, fihetsika manoloana ireo mpifindra monina, ary koa ny isan'ny olona manana fanabeazana amin'ny oniversite.
Ny fisian'ny fotodrafitrasa mandroso (tranombakoka, teatra, kianja, anjerimanontolo sns).
Fari-piainana: tsy an'asa, fidiram-bolan'ny mponina, vokatra an-tanàn-dehibe (vokatra an-tanàn-dehibe).
Fotoana ara-kolontsaina sy fialamboly: trano fisakafoanana, kafe, alim-pandihizana sns.
Ny fahita matetika amin'ny motera fikarohana, ny fitsangatsanganana ary ny tenifototra amin'ny tambajotra sosialy.
Ny malaza indrindra, naka ireo toerana telo voalohany fanomezam-boninahitra, dia tany UK - London, USA - New York ary France - Paris. Ny folo voalohany dia misy ny megalopolises any Eropa, Azia ary Etazonia.
Top 10 avy amin'ny Resonanse Consultancy:
London, Great Britain). "Foggy Albion" dia nitana andraikitra ambony nandritra ny 6 taona nisesy: ny tanàna tsara indrindra honenana. Eo amin'ny laharana faha-16 i Londres noho ny fisian'ny faritra maintso hanaovana fialamboly: valan-javaboary manan-kaja, toeram-pihazazana mpanjaka taloha, sns. Ny valan'aretina Covid dia nanao fanovana manokana tamin'ny fomban'ny renivohitra taloha: nanomboka nanome lanja bebe kokoa ny zavatra ananan'izy ireo ny mponina. Fa na izany aza, ny elanelana misy eo amin'ny manankarena sy ny mahantra dia mitombo hatrany.
New York, Etazonia). Iray amin'ireo faritra metropolitan lehibe indrindra eto an-tany amin'ny moron'ny Ranomasimbe Atlantika. Ny tanànan'ny skyscrapers sy ny fanehoana ny fanahin'ny fahalalahana amerikana. Toerana tianao indrindra ho an'ny mpizahatany sy mpitsangatsangana maro manerana ny planeta - ilay "Dream American" raha ny tena izy. Ny vondrom-piarahamonina rosiana, izay nipetraka teto hatramin'ny taona 70 tamin'ny taon-jato farany ary mitarika fomba fiasa mavitrika amin'ny fiainana ara-tsosialy, dia feno olona vaovao amin'ny trano maharitra. Na eo aza ny toe-piainana tsy manintona ankehitriny any Amerika, dia mijanona ho avo ny fari-piainan'izy ireo. Araka ny vinavina, tamin'ny martsa 2021, ny karama amerikanina dia efa ho 5000 300000 $ (XNUMX XNUMX roubles).
Paris, France). Raha hamaritana ny andianteny malaza: "Jereo Paris dia maty", mpizahatany maro no miteny am-pahatokisana hoe: "Jereo ary mijanona." Ny fanapotehana mpampihorohoro dia tsy nanapotika ny renivohitra frantsay: sitrana izy io ary niroborobo ary nijanona ho an'ny maro ny tanàna tsara indrindra honenana. Laharana faha-5 i Paris raha amin'ny isan'ny tranombakoka ary faha-7 amin'ny toeram-pivavahana ho an'ny fizahantany. Nahazo alàlana avy amin'ny manampahefana milomano ao Seine ny Parisianina, ka tsy te handao an'i Paris mandritra ny fahavaratra.
Moskoa, Rosia). Ny renivohitra rosiana dia sombin-tsakafo matsiro ho an'ny vahiny. Tena afa-po amin'ny fari-piainana sy ny karama izy ireo. Mahita fifandraisana mora foana izy ireo ary ekena ao amin'ny fiarahamonina Rosiana. I Moskoa dia renivohitra iraisampirenena, misy fotodrafitrasa mandroso, toerana mahafinaritra ho an'ny fialamboly, tantara taloha ary manintona maro. Ho an'ny vahiny maro, izy ny tanàna tsara indrindra eto an-tany. Ny fiadiana ny tompondakan'ny baolina kitra tamin'ny taona 2018 dia nahagaga an'izao tontolo izao tamin'ny mizana sy ny mahasarika ny endriny, nanokatra an'i Russia hafa tanteraka ho an'ny mponina marobe amin'ireo firenena ary nampitombo ny fahalianany tamin'ny kolontsain'ilay firenena. Ary koa, ilay metro nohavaozina dia tsy afaka ny hifaly - rehareha an-trano izay afaka mifaninana mora foana amin'ny metro andrefana.
Tokyo, Japon). Ny tanàn-dehibe futuristic, na eo aza ny loza voajanahary matetika mitranga ao aminy, dia heverina ho iray amin'ireo azo antoka indrindra. Laharana fahatelo amin'ny filaharana tanàna erak'izao tontolo izao i Tokyo ho an'ny fanambinana: faha-11 amin'ny isan'ny tsy an'asa, toha-bolafotsy iray amin'ny isan'ny foiben'ny Global 500, ary faha-2 amin'ny fisian'ny trano fisakafoanana. Nanaitra an'i Tokyo ny fiainam-pianany sy ny kolontsaina.
Dubai, UAE). Ny haitraitra arabo eo afovoan'ny fasika volamena sy ny Hoala Persika amin'ny ranomasimbe Indianina. Ivon-toeram-pivarotana sy fizahantany iraisam-pirenena - Dubai. Tanàna iray izay ifamatoran'ny fomban-drazana tatsinanana amin'ny ultramodernity. Noho ny areti-mifindra coronavirus, nihena be ny fikorianan'ny mpizahatany. Nisy fiantraikany teo amin'ny toekarem-pirenena io zava-misy io, fa tsy fanakianana. Dubai hatrany no be indrindra ny toerana honenana tsara indrindra ho an'ny mpifindra monina maro.
Singapaoro. Nahazo fahombiazana tena lehibe ny fanjakana megalopolis nosy aziatika tao anatin'ny 50 taona - avy amin'ny polisim-pirenena mahantra sy tsy mandroso, nivadika ho fahefana atsinanana izy io. Malaza amin'ny seranam-piaramanidina mpamorona azy ary, mazava ho azy, ny Rain Whirlwind, riandrano avo indrindra eto an-tany.
Barcelona, ​​Espana). Ny renivohitra Catalan maritrano, mamorona ary amoron-dranomasina dia andriamby ho an'ny mpizahatany satria mandia fotoan-tsarotra ny fotoanan'ny areti-mandringana. Bara maro, izay nikatona manamorona ny morontsiraka marobe noho ny tsy fahampian'ny mpitsidika mitsidika, no mety tsy hisokatra mihitsy.
Los Angeles, Etazonia). Ny tanànan'ny anjely mpizaha tany sy mahandro sakafo dia manomboka miverina tsikelikely aorian'ny Covid-19, saingy tsy manakana azy tsy hijanona ho iray amin'ireo megacities tsara eto an-tany izany.
Madrid, Espana). Ny renivohitra Espaniola dia mpandray anjara vaovao amin'ny folo voalohany, saingy efa ela no zavatra hita ho an'ny mpizahatany. Ny ekonomia renivohitra dia mandroso ary tsy mijanona amin'ny fiezahana handroso. Manana toetrandro mahafinaritra ho an'ny fahasalamana ny tanàna, ary saika toetr'andro tsara foana, izay vaovao mahafaly ho an'ny mpitsidika. Miverina indray ny fiainana amin'ny alina aorian'ny areti-mandringana (toerana faha-6 amin'ny naoty ho an'ny fialamboly), mitohy hatrany ny fandrindrana ny tanàn-dehibe.
Fandraisana vahiny sy fihetsika manoloana ireo mpifindra monina
Aiza no toerana honenana tsara indrindra mpizahatany sy ireo maniry ny hijanona maharitra? Any amin'ny firenena maro, dia mampiseho fihetsika tia namana amin'ny vahiny izy ireo ary tonga any amin'ny trano maharitra. Talohan'ny areti-mandringana, dia misy ireto tanàna ireto: Alicante, Malaga, Lisbon, Valencia, Buenos Aires sy ny hafa. Ny tena mahatoky indrindra araka ny naoty Expat Insider an'ny taona 2020 dia ny saikinosy Iberia.
Tena sariaka ny Espaniola Alicante sy Portiogey Lisboa: afa-po amin'ny fitsipi-piainana, fialamboly ara-kolontsaina ary fahaizana mianatra haingana ilay fiteny ny mpitsidika.
Sarotra be indraindray ny mifindra any amin'ny firenena hafa: ny tompon'andraikitra amin'ireo firenena dia mitsabo an'izay mitety an'izao tontolo izao amin'ny fitadiavana tanàna tsara indrindra honenana. Ilaina matetika ny manana antony tsara hifindra: fanambadiana ofisialy, asa iray na fisian'ny renivohitra mahafinaritra.
Ny fotoana ahazoana fahazoan-dàlana hipetraka na ho olom-pirenena dia mitombo eo amin'ny mpampiasa vola. Mba handraisana anjara amin'ny programa momba ny fampiasam-bola dia manome ampahany kely amin'ny fampandrosoana ara-toekarena an'ny fanjakana izay hipetrahan'izy ireo izy ireo. Ny vahiny mifindra monina dia afaka manokatra orinasa, mividy trano / trano na fametraham-bola.
Ny programa fampiasam-bola dia miasa mavitrika any Espana, Portugal, Gresy. Amerika koa dia faly manome fialofana ho an'ny olom-pirenena azo antoka ara-bola amin'ny firenena hafa izay vonona hampiasa vola ao. Ilay mpangataka nambara fa hipetraka dia afaka mivezivezy amin'ny trano maharitra any amin'ny tanàn-dehibe vahiny amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola lehibe ao amin'ny firenena mpampiantrano.
Fampiononana sy fahadiovana
I Wina dia eo amin'ny laharana faha-32 amin'ireo folo voalohany, ary heverina ho iray amin'ireo lehibe indrindra toerana honenana tsara indrindra tsy tongatonga ho azy. Tanàna mahafinaritra sy mahatalanjona ity manana endrika manan-tantara, toekarena mandroso, tsangambato ary kolontsaina. Ao amin'ireo fotodrafitrasa mandroso ao an-tanàna dia toerana manokana no natokana ho an'ny faritra fialamboly maitso, zaridaina, trano fisotroana kafe. Ny mponin'i Vienna dia mpankafy fitateram-bahoaka, noho izany dia tsy mandeha lavitra amin'ny fiara manokana izy ireo, ka mitahiry ny fahadiovan'ny arabe sy ny rivotra madio amin'ny lafiny lehibe kokoa. Vienna dia ekena amin'ny 2021 ny tanàna tsara indrindra honenana amin'ny resaka ekolojia.
Aostralianina dia mamela ny mpifindra monina hipetraka maharitra amin'ny famindram-bola farany. Ankoatr'izay, tsy ilaina ny fampiasam-bola, fa ny mpangataka fahazoan-dàlana na zom-pirenena dia ilaina mba hanome porofo ny fahaizany ara-bola. Ity fepetra ity dia mifototra amin'ny fepetra iray hafa: ho any amin'ny firenena mandritra ny efa ho 6 volana isan-taona.
Ny haavo sy ny kalitaon'ny fiainana
Zurich no ivon-toekarena sy tanàna lehibe indrindra any Suisse (na eo aza ny isan'ny mponina ao aminy - olona 428) laharana faha-000 amin'ny laharana voalohany 36 izy. Raha ny filazan'ny mpifindra monina maro ny tanàna tsara indrindra eto an-tany eo amin'ny lafiny fifanampiana sy fanambinana. Mahafinaritra, voakarakara tsara, bourgeois malina ary tena toa orinasa, manintona poketra avy amin'ny lafivalon'ny planeta i Zurich. Mahasoa mitovy amin'ny fiainana sy ny asa. Ny isan'ireo olom-pirenena tsy an'asa dia mitana ny laharana faha-9. Ny tanàna dia ao amin'ny folo voalohany amin'ny Global 500.
Suisse dia manasa ireo mpifindra monina manankarena sy tsy miankina honina amin'ny trano maharitra, nefa miaraka amin'ny fepetra fandoavana hetra mitentina 450000 fr isan-taona. Mba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka dia tsy maintsy mipetraka ao Zurich mandritra ny 200 andro isan-taona ianao - izany dia takiana amin'ny manampahefana Soisa.
Ho an'ny maro firenena tsara indrindra miaina ary ny manao asa fandraharahana dia Etazonia. Araka ny Startup Genome, New York, San Francisco ary London dia tafiditra ao anatin'ny lisitr'ireo tanàna hajaina indrindra amin'ny famoronana fanombohana.
Ny Heart of America dia laharana faharoa amin'ny lisitr'ireo be indrindra, tsy amin'ny resaka hetsika ara-kolontsaina sy ivon-toerana ihany, fa amin'ny resaka fikarohana asa sy ny fampiharana ireo karazan-kevitra ara-barotra rehetra. Any amin'ny laharana fahefatra i New York raha amin'ny isan'ireo Birao Manerantany.
San Francisco dia nanao an'ity lisitra ity noho ny fisian'ny faritra iray manontolo an'ny fikambanana teknolojia - Silicon Valley. Amin'ity tanàn-dehibe ity dia misy olona marobe manana fanabeazana amin'ny oniversite, ary ny isan-jaton'ny vahiny eo amin'izy ireo dia somary lehibe. Tanàna iza no tsara honenana - New York na San Francisco - samy mamaritra ho azy ny tsirairay, fa ny fepetra takian'ny orinasan'ny fifindra-monina amerikana dia mitovy amin'ny tsirairay.
Mba hahafenoany hipetraka any Amerika, ny mpifindra monina dia tsy maintsy mahazo visa: EB5 (miaraka amin'ny fampiasam-bola $ 900000) na E2 ($ 100000). Ny EB5 dia mihevitra ny fampiasam-bola tsy mitongilana, izay tsy ilaina ny fandraisana anjara amin'ny asan'ny orinasa. Ny E2 dia midika hoe manokatra orinasa any Etazonia. Ny safidy voalohany ihany no azon'ny Rosiana atao, izay tsy dia mety loatra sy mahasoa ny maro noho ny antony tsy maintsy hiandrasana roa taona hafa. Ho fanampin'izay dia be dia be ny vola. Saingy afaka mandeha amin'ny làlana hafa ianao: alao aloha ny zom-pirenen'i Grenada (firenena iray izay nanaovana sonia fifanarahana tamin'ny Amerikanina), nefa nandoa $ 2 ho an'ny pasipaoro. Ary aorian'izany, mangataha visa visa amerikana E15000. Mba hangataka eo noho eo ny zom-pirenen'i Grenada sy E2 any Etazonia dia mampiasa 2% izy ireo.
Londres dia nibodo ny toerana voalohany teo amin'ny fari-piainan'ny tabilao an-tanàn-dehibe misy tanàna an-tapitrisany nandritra ny taona maro. Ny fidiram-bolan'ny mponina, ny fisian'ny fotodrafitrasa mandroso: tsangambato maritrano, ny tranombakoka tsara indrindra eran'izao tontolo izao, oniversite, sns. Manampy azy ho voalohany. Ny United Kingdom dia manome fahazoan-dàlana - Visa mpamatsy vola mandritra ny telo taona amin'ireo vahiny manankarena rehetra izay maniry hampiasa vola mihoatra ny 2 tapitrisa sterling amin'ny fampandrosoana ny fanjakana miteny anglisy. Ireo mpifindra monina manankarena, aorian'ny fanampiana UK, dia afaka miaina, miasa ary mianatra amin'izany.
Ny tanàna tsara indrindra eto an-tany Lisbon dia azo raisina ho toy ny toerana fialantsasatra. Io no tanàna tranainy sy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, Eropa Andrefana ary ny seranan-tsambon'i Portugal. Noho ny toetr'andro mediteraneanina mahafinaritra, i Lisbon dia manana ririnina mafana indrindra any Eropa ary andro mafana amin'ny taona isan-taona. Izy io dia toeram-pialofana sy tanàna azo antoka ary misy mponina maherin'ny 500. Portugal - firenena tsara indrindra honenana ho an'ireo izay tia toetrandro mafana sy toerana misy rano: ny Atlantika dia eo akaiky eo. Tamin'ny taona 2020, ny firenena atsimo dia nomena ny laharana voalohany tamin'ny dia eropeana.
Mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Portiogaly koa ny Cosmopolitans miaraka amin'ny fanampian'ny fampiasam-bola: 250000 900000 euro farafaharatsiny. Ny hetsika malaza eo amin'ireo maniry hipetraka maharitra dia ny fividianana trano: trano na trano XNUMX euro.
Ao amin'ny laharam-pahamehan'ny sakafo matsiro indrindra ao an-tanàna, London dia matetika no laharana voalohany, miaraka amin'ireo trano fisakafoanana misy kintana mihoatra ny 70. Ny toeram-pisakafoanana mahandro sakafo any Londres dia manolotra ny vahininy sy ny mponina ho azy ireo lovia voajanahary sy tena tsara avy amin'ny hena, trondro, legioma. Ny renivohitr'i Angletera dia mitohy ny tanàna tsara indrindra honenana ary amin'ny lafiny kolontsaina sy fahandroan-tsakafo.
Ivon-toerana gastronomika toa an'i Tokyo (faha-5 amin'ny lisitra Resonanse) dia tsy azo odian-tsy hita. Trano fisakafoanana 230 no kintana Michelin. Sakafo matsiro an-jatony maro miaraka amina akora voajanahary ny ankamaroany no manaitra ny mpizahatany amin'ny maha-izy azy sy ny tsirony tsy manam-paharoa. Chahan, imoni, wagashi, sushi - manaova fitiavana ny gourmets ary mijanona ao amin'ny tanàna japoney hahafahana mankafy matetika ny sakafo Japoney.
Sarotra be ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Japon, satria firenena kely mihidy izy io ary be mponina. Afaka mahazo pasipaoro japoney ianao amin'ireto fepetra manaraka ireto:
fanambadiana ara-dalàna miaraka amin'ny olom-pirenena / olom-pirenena japoney;
fonenana mandritra ny 5 taona farafahakeliny ao amin'ny faritanin'ny fanjakana (fepetra takiana ho an'ny mpangataka rehetra).
baikon'ny Japoney miteny sy an-tsoratra;
manao hetsika ofisialy any Japon, miankina amin'ny maha matihanina ny mpiasa;
ny mpangataka dia tsy maintsy manana vola $ 25000 farafaharatsiny.
Azonao atao ny mandresy lahatra ny manam-pahefana Japoney hamoaka fahazoan-dàlana hipetraka raha toa ka mampiasa vola 50000 XNUMX $ ao amin'ny Capital of the Rising Sun. Mba hanatanterahana izany dia manokatra ny orinasany manokana izy ireo, izay tohanany sy ampivoariny lalandava, manome asa ho an'ireo mponina ao an-tanàna. Mandritra izany fotoana izany, ny habetsaky ny fampiasam-bola dia tsy maintsy ampitomboina tsy tapaka.
Ho tonga i Tokyo ny tanàna tsara indrindra eto an-tany ho an'ny fonenana maharitra, raha manaraka ny fepetra rehetra takiana ianao, manaja ny firenena sy ny fadin-tseranana ary mandray anjara ampy amin'ny toekareny.
Ny fividianana trano dia mahasoa amin'ireo toerana ireo aiza no toerana onenana tsara indrindra, ohatra - any Barcelona. Tanàna Espaniola amin'ny morontsirak'i Mediterane izy miaraka amin'ny indostria mandroso sy ny varotra, ary teboka manan-danja amin'ny zotra fizahan-tany. Ity toerana tsara tarehy isan-taona talohan'ny areti-mandringana ity dia nahasarika mpizahatany an'arivony, ary nandritra ny valan'aretina dia nakatona izy io mba hidirana, izay tsy nisy fiantraikany ratsy tamin'ny toekarena Portiogey, ary indrindra ny tsenan'ny trano sy tany. Azo atao izao ny mividy trano any Espana miaraka amin'ny fihenam-bidy 30%, ary ny vidin'ny iray metatra toradroa amin'ny faran'ny taona 2020 dia 1391 euro. Rehefa miverina any Barcelona ireo mpizahatany dia hiakatra ny vidiny. Ireo izay mampiasa vola amin'ny trano amina trano amin'izao fotoana izao dia afaka mahazo vola amin'ny hofan-trano na amidy rehefa nosokafana ny sisintany.
Barcelona koa dia manana programa fampiasam-bola ho an'ny cosmopolitans: ny fandraisana anjara amin'ny volan'ny tanàna dia 500000 Euros.
Fampandrosoana amin'ny ho avy
One from toerana honenana tsara indrindra amin'ny ho avy dia mety ho lasa Atena. Eo amin'ny laharana faha-29 izy ireo ao amin'ny lisitry ny megacities mahasoa. Ny renivohitr'i Gresy dia ivon-toeran-kolontsaina, ara-tantara ary ara-toekarena miaraka amin'ny toetry ny toetrandro tena tsara amin'ny fiainana. Ny vidim-piainana ao dia ambany kokoa raha oharina amin'ny tanàna hafa misy naoty, izay tsy afaka ny hampifaly ny mpizahatany. Mitombo isan-taona ny fahafahan'ny renivohitra grika, satria ny governemanta ao aminy dia mirotsaka amin'ny fanavaozana ara-toekarena, izay ny lehibe indrindra dia ny ady amin'ny kolikoly
Ireo izay maniry ny ho tonga atena hiaina ao Atena dia tokony hampiasa vola eo amin'ny 250000 euro.
Tanàna iza no tsara honenana - ny olona mihitsy no manapa-kevitra. Mitranga izany fa rehefa nitsidika tanàna lehibe iray ianao, dia tian'ny mpizahatany iray izany ka nanonofinofy ny hifindra aloha izy. Zava-misy ny fampiharana ny volavolan-kevitsika, saingy tsy maintsy tsaroantsika fa ny famindrana toerana any amin'ny firenena hafa dia tsy misy raha tsy misy ny fanitsiana sy ny adin-tsaina, ary tsy azo atao izany raha tsy misy ny fandraisana anjara ara-bola.
AAAA ADVISER dia hanampy anao ho lasa mpandray anjara amin'ny tetikasa fampiasam-bola any amin'ny firenena liana amin'ny fidirana amin'ireo olona mahaleo tena ara-bola. AAAA ADVISER dia mpandraharaha manana fahazoan-dàlana ho an'ny zom-pirenena ofisialy mifototra amin'ny fampiasam-bola ataon'ny mpifindra monina. Eto ianao dia hahazo fanampiana sy torohevitra manam-pahaizana momba ny olana rehetra amin'ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka na Citizenship amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola.
↑ toerana honenana tsara indrindra ↑ firenena tsara indrindra honenana ↑ firenena iza no tsara honenana ↑ tanàna iza no tsara honenana ↑ ny firenena tsara indrindra eran-tany ↑ ny tanàna tsara indrindra eto an-tany ↑ firenena tsara indrindra honenana ↑ tanàna tsara indrindra honenana ↑ aiza no toerana onenana tsara indrindra ↑ Firenena onenana ↑ tanàna honenana ↑ firenena fahazoan-dàlana hipetraka ↑ firenena onenana maharitra ↑ trano maharitra ↑ mandao firenena ↑